DEG DEG:- Adeegii Internetka ee magaalada Muqdisho oo goordhaw dib usoo laabtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Adeegii Internetka ee magaalada Muqdisho oo goordhaw dib usoo laabtay
Waxaa goordhaw dib usoo laabtay dhamaan adeegii Internetka ee ka jiray magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaala gobolada koonfurta dalka Soomaaliya.
Saacadihii ugu dambeysay waxaa xaalad jahwareer ah ay lasoo daristay dhamaan hay’adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, kadib markii la waayay adeegyadii shirkadaha Internetka ay bixin jireen.
Shirkadaha bixiya adeega Internetka ayaa saacadihii ugu dambeysay ku howlanaa cilad bixinta Internetka, kadib markii la sheegay in qaar ka mid ah fiilooyinka internetka soo gudbiya ay cilad ku timid.
Internet la’aanta ka dhacday magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka ku yaala gobolada koonfurta Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemay, waxayna saameyn weyn ku yeelatay howl-maalmeedkii bulshada ku nool qeybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, internet la’aanta maanta ka dhacday qeybo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa kusoo beegantay xilli maanta lagu waday in dood wadaag loo qabto qaar ka mid ah musharixiinta ku tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya.